Sidee loo adeegsadaa Amazon Marketing Services si uu labalabeeyo faa'iidadaada?
Haddii aad alaabtaada ku iibinayso Amazon, ujeedadaada ugu muhiimsan waxay u badan tahay inaad soo bandhigto alaabtaada horteeda inta ugu badan ee macaamiishaada suurtagalka ah, oo ugu dambeyntii keeno dakhli dheeraad ah. Qeybta Amazon ee algorithm oo dhan ayaa loogu talagalay in lagu siiyo alaab iibiyeyaasha leh natiijooyinka raadinta ugu saxsan ee ku saleysan doorashadooda iyo raadinta taariikhda. Marka, wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad raacdo tilmaamaha Amazon si aad u muujiso alaabtaada horay u dhageystayaashaaga.
Iyadoo aan loo eegin xeeladaha hada jira, marnaba ma dhicin inaad tixgeliso fursadahaaga. Nasiib wanaag, Amazon waxay siisaa ganacsatada leh adeegyo kala duwan oo fududayn kara nidaamkooda iibka kadibna dakhliyo dheeraad ah u keenaan Amazon. Barnaamijka Amazon Marketing Services waa xulashada ugu fiican ee iibiyeyaasha Amazon kuwaas oo raadinaya fursadaha lagu kordhiyo iibkooda iyo kor u qaadida dakhliga guud ee ganacsiga.
Si kastaba ha ahaatee, waxay sii kordhaysaa su'aasha ah inaad u baahan tahay inaad tijaabiso adeegga cusub ee suuq-geynta ama isticmaalka hababka la xaqiijiyay. Laakiin haddii taatikada cusub ee suuq-geynta cusubi ay u muuqan doonto mid ka sii wanaagsan? Sidaa darteed, waxaan u maleynayaa inay haboon tahay in la tijaabiyo adeegyada Amazon ee suuq-geynta si ay ugu sii socoto TOP-ka Amazon e-commerce game. Sidaa daraadeed, aan ka wada hadalnay faa'iidada iyo khasaarooyinka AMS si ay u fahmaan haddii ay tahay maalgelin ama in kale.
Amazon marketing Services: mabda'a shaqada
Amazon marketing Services (AMS) waa mareeg rikoodh ah oo riix ah oo iibiya alaabta hor u ah dhageystayaasha la beegsanayo oo ku saleysan shuruudaha raadinta ee la beegsanayo, badeecadaha, doorbidyada, iyo taariikhda wax iibsiga.
Barnaamijka Amazon Marketing Services wuxuu bixiyaa fursadaha soo socda ee ganacsiyada:
Madaxda raadinta ee madax;
Xayeysiinta raashin bixinta.
Barnaamijka AMS ee kowaad wuxuu ahaa kaliya oo loo heli karo iibiyeyaasha Amazon. Si kastaba ha noqotee, shuruucda waa la bedelay, isla markaana waxay sidoo kale diyaar u tahay inay si toos ah u daabacaan xisaabaadka iyo wakiilada iibiyaha. Si kastaba ha noqotee, waa in la sheegaa in ganacsatada ay xiiseynayaan Amazon Marketing Services inay noqdaan ka qaybgalayaasha barnaamijka Amazon Vendor Central. Adeegyadan xayeesiinta ayaa loo abuuray si ay u siiyaan bartilmaameedyo, iyo ololeyaal muhiim ah oo loogu talagalay kuwa iibiya Amazon. Amazon waxay isticmaashaa xog aad u weyn si ay ula socdaan iibiyeyaasha iyagoo xayeysiis ah oo ay aaminsanyihiin in dukaanku uu isku kalsoonaan doono. Amazon waxay aruurisaa macluumaadka khibrada dukaamadii hore ee Amazon waxayna raadsanaayeen sida macaamilku u raadinayaan wax ku saabsan moobiil. Sidaas darteed, adoo qaadanaya dhammaan dhinacyadaas, waxaad ka heli kartaa xayeysiiskaaga horteeda macaamiishaada iman kara kuwaas oo xiiseynaya badeecadaha sida kuwaaga.
Waxaad maamuli kartaa ololahaaga xayeysiiska iyada oo loo marayo interface Amazon Marketing Services. Interface wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la socotid dakhligaaga iyo kharashka qiimaha riix si aad si sahlan u qiimeyn karto soo noqoshada maalgashiyada. Intaa waxaa dheer, waxaad la socon kartaa kharashka xayeysiinta ee iibka iyo hubi haddii ololehaaga xayaysiinta uu faa'iido u yahay ama aan.
Si kastaba ha ahaatee, barnaamijkan Amazon sidoo kale wuxuu leeyahay cillado. Xidhiidhka AMS ma ahan mid saaxiibtinimo leh. Xitaa xitaa ma tirtiri kartaa xayeysiisyada la joojiyay. Intaa waxaa dheer, cusbooneysiinta warbixinta inta badan waxay shaqeyneysaa mid aad u yar Source .